Jery taratra… herinandro : mifampiandry lava… | NewsMada
Jery taratra… herinandro : mifampiandry lava…
Andrasana ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny amin’ny fitsipika anatiny eo anivon’ny Antenimierandoholona. Eo koa ny amin’ny tsy fanarahan-dalàna tamin’ny fifidianana birao maharitra: kandidà ho filoha natolotry ny antoko politika fa tsy ny loholona; fitsipika anatiny tamin’ny taona 2008, nampiharina fa tsy natolotra holanina. Hisy fanovana ny birao maharitra?
Andrasana ny fanovana tanteraka na fanamboarana ny governemanta. Tsy azo ihodivirana? Nisy ny fanendrena minisitra roa ho loholona. Amin’izany, misy ny fanetsehana sy fampitenenana ny fikambanan-drazana etsy sy eroa. Iadiana ny amin’ny fiavian’izay hotendrena izao na izatsy? Misy ny miseho matetika amin’ny haino aman-jery: fampielezan-kevitra sy fanamarinan-tena fa be zava-bita.
Andrasana izay tena vahaolana haingana sy maharitra amin’ireo ianjadian’ny haintany sy ny kere any amin’ny faritra atsimo. Eo ny atrikasa momba izany amin’izao faran’ny herinandro izao. Manginy fotsiny ny tondra-drano amin’ny faritra iva eto Antananarivo Renivohitra. Vokatry ny fanotorana tany tsy misy farany? Na ny tsy fanamboarana lakandrano… Miverina isan-taona ny fahavoazana efa ho lava.
Andrasana izay tena fahatanterahan’ny fepetran’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny famatsiam-bola: fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana, ady amin’ny kolikoly, fampanjakana ny fandriampahalemana… Mampikaikaika ny maro ny asan-jiolahy eny rehetra eny. Ambonin’izany ny fidangan’ny vidim-piainana, ny tsy fisian’ny asa… Hisy fanovana na fanamboarana ny fiainam-bahoaka amin’izay?
Hatramin’izao, mifampiandry lava amin’izay hatao… Ny eo anivon’ny fitondram-panjakana io. Misy mpanao politika ny manararaotra mampiaka-peo tato ho ato. Raha ny vahoaka, toa efa zary very fanahy mbola velona. Na amin’izay mahazo azy io, na amin’izay afitsoky ny mpitondra: tian-kano, tsy tian-kano. Tsy mbola hita sy iainana izay fahamarinan-toerana sy fitoniana, na eo amin’ny mpitondra na ny vahoaka.